Masibambe iqhaza embukisweni we-2021SNEC
Idokodo: I-Outdoor M10
Idethi: 3.-5 Juni 2021
Engeza: I-Shanghai New International Expo Centre
Izithiyo zomsindo ezinwetshiwe zomgwaqo amaphaneli elanga
Amazwe (iJalimane, iBelgium, neNetherlands) ahlanganyela imigwaqo engaphezu kwamakhilomitha angu-800,000 angasetshenziswa ukuhlangabezana nengxenye yezidingo zawo zamandla nogesi. Emgwaqweni onguthelawayeka ongamamitha angu-400 ubude e-Netherlands, izithiyo zomsindo azigcini nje ngokunciphisa umsindo, kodwa futhi zifakwe namaphaneli elanga ukuze udale...
Umhlangano wokuxoxisana nokushintshisana
Kube nengxoxo nokushintshisana nge-Shantou Vocational College ne-Multifit ngalolu suku lwangomhla zingama-29 kuLwezi, 2021. Bamukele ngokufudumele othisha nabamele abafundi be-Shantou Vocational and Technical College ukuze bavakashele inkampani yethu. Ngaphansi kokuqondisa komphathi we-admini...
Siyisinqumo sesiqondiso esifanele sokuhlanza solar panel photovoltaic system
Ukuzakhela ngokwakho kanye nokuzisebenzisa akugcini ngokusebenzisa ngokugcwele uphahla oluyize lwebhizinisi, kodwa futhi kuba yisinqumo sokuqala samabhizinisi ukukhulisa imali engenayo nokunciphisa izindleko. Ngokusho kwezimpawu zophahla olusabalalisiwe iphrojekthi yokukhiqiza amandla kagesi we-photovoltaic futhi ihlanganiswe ...
Ukwakhiwa Kwephrojekthi-Indawo Yokufaka I-MULTIFIT Intelligent Robot ehlanzekile
Ukubaluleka kokuhlanza nokugcinwa kwe-PV module Amamojula we-Photovoltaic azwela kakhulu ekushiseni. Uthuli olunjalo luqoqwa endaweni yemojuli, okwandisa ukudluliswa kokushisa kanye nokumelana nokushisa kwamamojula we-photovoltaic futhi kuba ungqimba olushisayo lwe-thermal insulation, umphumela...
Izibalo ezinkulu zedatha ye-Multifit Solar, ngicabanga ukuthi irobhothi lokuhlanza ilanga kuyisinqumo esihle.
Ilanga libalele. Akudingekile ukuthi sikhokhele ugesi, futhi uhlelo lukhiqiza ugesi ezindaweni ezahlukene nsuku zonke. Lena iphrojekthi yesistimu ye-photovoltaic, engenza ngibubule. Unikele amandla esibhakabhakeni esiluhlaza t...
Soalr Light Indlela yonke enyakatho, mina phambili.
Yonke indlela eya enyakatho, iNkanyezi yaseNyakatho ingiqondisa phambili. Ngemva kokuphuma emsebenzini, ngibonakala ngiyinqwaba yodaka, angikwazi ukulicosha. Haha, ngiyabona ukuthi bengimatasa usuku lonke, hhayi mina kuphela, kodwa nabangane bami eshabhu. Thina, ukuze sibusise amakhasimende ethu ngesikhathi onyakeni omusha,...
Inkampani Yethu Ibambe Ukuqeqeshwa Okukhethekile Nocwaningo Ngokukhiqizwa Kwezokuphepha
Ukuze kwandiswe ulwazi lokuphepha qinisa ukuqwashisa ngokuphepha khuthaza isiko lokuphepha dala isimo sokuphepha siqinise ukubonakala nokufundiswa kokukhiqizwa kwezokuphepha kwenkampani yethu khuthaza ukuthuthukiswa kwesiko lokuphepha Umqondisi uLiu uchaze ngokuyinhloko umbono...
Emhlanganweni weKhomishana emaphakathi yezezimali nezomnotho, i-carbon peak kanye ne-carbon neutralization izofakwa ekugadweni nasekuhloleni.
Ngemva nje kokuphela kwamaseshini amabili, Ikhomishana emaphakathi yezezimali kanye ne-Economics iphinde yasho ukuma kwayo ngokunyuka kwekhabhoni kanye nokuncishiswa kwe-carbon neutralization emhlanganweni wesishiyagalolunye, futhi yaveza indlela yokuqaliswa. Ibonisa ukubaluleka okungenakushintshwa kokukhuphuka kwekhabhoni kanye nokungathathi hlangothi kwe-carbon...
Ukufakwa kwesiteshi samandla e-photovoltaic ngokuvumelana nezimo zendawo
Ake sivakashele iZhejiang Agriculture and Forestry University. I-Zhejiang Agriculture and Forestry University iyinyuvesi yezolimo neyehlathi yesifundazwe enomlando omude wokuqhuba isikole. Ihlale idume ngokuzibophezela ekwakhiweni kwempucuko yezemvelo. T...
I-Zhongneng "photovoltaic + shede yemoto"
Ukusebenzisa indawo engenzi lutho yendawo yokupaka ukuze kwakhiwe indawo yokupaka ye-photovoltaic, amandla akhiqizwayo angathengiswa kuhulumeni ngaphezu kokuhlinzeka ngezimoto, ezingenayo nje imali engenayo enhle kakhulu, kodwa futhi inciphisa ingcindezi yamandla yedolobha. I-Photovoltaic ichitha ukonga amandla ngesikhathi esifanayo, ...
Iziteshi zamandla e-Photovoltaic zifakwe ophahleni lwamabhizinisi! I-CCTV iyayithanda!
Amabhizinisi ezimboni nezentengiselwano namapaki emboni afaneleka kakhulu ukufaka ugesi we-photovoltaic ngenxa yokusetshenziswa kwamandla amakhulu kanye nenani eliphezulu likagesi. Ngaphezu kwalokho, uhlobo lwe-photovoltaic + uphahla lwezitshalo nalo luye lwasekelwa kakhulu izinqubomgomo zikazwelonke. Izindawo eziningi ku-t...
Ukugubha iminyaka engama-40 kwasungulwa i-SAR
Sigubha iminyaka engama-40 kwasungulwa iSifunda Esikhethekile Sokuphatha, besihlale siphikelela ekuqiniseni umkhankaso wokuqamba izinto ezintsha kanye nokugqugquzela ukuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu uNobhala Jikelele u-Xi Jinping agcizelelwe enkulumweni ebalulekile yeNgqungquthela Yokugubha iminyaka engama-40 ye ...